MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: 2010
Current Burma & Kin Won Min Gyi's Poem
ယနေ့ ဗမာပြည် အခြေအနေနှင့် ကင်းဝန်မင်းကြီး၏ တိဏ္ဍုကပျို့
ကင်းဝန်မင်းကြီးလည်း တိဏ္ဍုကဇာတ်တော်ကို ပျို့ဖွဲ့ခဲ့ရာ တိဏ္ဍုကပျို့ ပိုဒ်ရေ(၉)တွင်
ဇာတ်တော်၏ အဓိကအချက်ဖြစ်သော မင်းနှင့်မင်းမှီစိုးကပ်တို့ မွှေ၍ ပြည်လေးမျက်နှာ သွက်သွက်ခါဖြစ်ပုံကို...
"ခုနစ်ဖြာအင်၊ အကြီးတင်၍၊ မင်းတွင်သေချာ၊ မစေရာသား၊
လူမှာလူယုတ်၊ လူအစုတ်ကို၊ ဥက္ကဌကြီး၊ တင်ပြီးထိုရော်၊
ခန့်ထားသော်လည်း၊ မလျော်တုံမြို့၊ မှူးမတ်တို့ကား၊ ဆယ်ဖို့တဆ၊
အမျှမျှဖြင့်၊ သမ္မတစဉ်လျှောက်၊ မြတ်ရွှေမှောက်တို့၊ ခံကောက်ခွဲယူ၊
နည်းရှိမူလည်း၊ မထူစွာဘိ၊ ရမိရစေ၊ ရွှေငွေမက်မော၊
ရမ္မက်ပြော၍၊ ရက်ရောလှစွာ၊ ကိုချမ်းသာက၊ သတ္တ၀ါဗိုလ်ခြေ၊
ညက်ကြေပြုန်းတီး၊ ဆုံးရှုံးကြီးလျက်၊ မီးနှင့်အတူ၊ ပူလင့်ကစား၊
သနားမတဲ့၊ စားမကဲ့သို့၊ ချဲ့ချဲ့ထွင်ထွင်၊ ခေါ်ငင်မင်းစေ၊
ကြိမ်းများထွေဖြင့်၊ မွှေမွှေနှောက်နှောက်၊ ပြုတုံမြောက်၍၊ တောက်လုဘနန်း၊
နေရှိန်မြန်းသား၊ ပန်း၏သဖွယ်၊ ကွယ်ခဲ့သုခ၊ ပခဲ့တရား၊
ပါးခဲ့ဗြဟ္မစိုရ်၊ များထိုထိုနှင့်၊ ခိုရာမရ၊ နေ့ကာလ၌၊
ဖျက်ထမင်းစေ၊ ညရောက်ချေလည်း၊ မွှေသည့်ခိုးသား၊ လွန်မြောက်မြားလျက်၊
တရားမဲ့လတ်၊ ယွင်းခဲ့လွတ်မှ၊ ဖွတ်ဖြစ်မိကျောင်း၊ မြစ်ကြောင်းမချမ်း၊
အကျင့်သွမ်းသို့၊ စူးစမ်းမဲ့လတ်၊ မှူးမတ်မည်မည်၊ အကြီးတည်၍၊
ပြည်လေးမျက်နှာ၊ သွက်သွက်ခါသည်၊ ချမ်းသာမယှဉ် ကွာစေတည်း"
ရာပြည့်စာအုပ်တိုက် ၁၅ နှစ်ပြည့် အမှတ်တရစာစဉ် ၁၂
ရွှေကိုင်းသား (1912-1987) ၏ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း စာပေနှင့် အခြားစာတမ်းများ စာအုပ်
ပထမအကြိမ် (သြဂုတ်၊ ၂၀၁၀)ပါ...
မြန်မာစာပေနှင့် ပန်းချီအနုပညာ ဆောင်းပါး [စာပေနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ စာတမ်းများ (၁၉၆၄)။ မိုးဦးပန်းစာပေတိုက်၊ မန္တလေး။ စာ (၁၄-၄၂)] မှ ... ကူးယူဖော်ပြသည်။
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 27.12.100COMMENTS
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 13.12.100COMMENTS
Labels: PHOTOS, ZAGANAR
How Is The Condition? by Black
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 8.12.100COMMENTS
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 4.12.100COMMENTS
ရခိုင်ပြည်နယ် "ဂီရိ" မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ပြည်သူများ ကူညီထောက်ပံ့ရေး
မန္တလေး ဂရုဏာရှင်များ အဖွဲ့ 
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 2.12.100COMMENTS
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 20.11.100COMMENTS
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 14.11.10 1 COMMENTS
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 14.11.102COMMENTS
A Poem For The Selfish
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 25.4.100COMMENTS
Labels: "MEDIA to MEDIA" FIGHTING, OTHERS' POEMS
Another ThinGyan Bombs Blasts at MyitSone Dam Project
(MyitSone Dam Photo - http://lwannaing.blogspot.com/2010/02/blog-post_9898.html)
တရုတ်၊ ယူနန်ပြည်နယ် လျှပ်စစ်မီးပေးရေးအတွက် ရည်ရွယ်ဦးတည်ကာ ဧရာဝတီမြစ်အစ မေခ၊ မလိခမြစ်ဆုံကို ခွ၍ ဆောက်လုပ်နေသည့် မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၌ သင်္ကြန် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ (၁၇၊ ဧပြီ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်) နံနက်အစောပိုင်းက ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အနည်းဆုံး လူ (၄)ဦးခန့် သေဆုံးခဲ့ပြီး (၁၂)ဦးခန့် ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်း www.kachinnews.com နှင့် အခြားသတင်းအေဂျင်စီများအရ သိရှိရသည်။ Asia World Company အဆောက်အဦး၌ ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူအများစုမှာ တရုတ်လုပ်သားများဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ဗုံးများဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လုပ်ငန်းသုံး ဘူဒိုဇာများ၊ ထရပ်ကားများစွာ ပျက်စီးသွားသည်ဟု သိရပြီး ဆုံးရှုံးမှုပမာဏအသေးစိတ်ကို မသိရှိရသေးပါ။ ဒေသခံ ကချင်လူမျိုးများကို ဒုက္ခရောက်စေမည့် အဆိုပါ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းမှာ ဗမာပြည်ဘက်မှ Asia World Company, အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ တရုတ်ပြည်ဘက်မှ China Power Investment Corporation (CPI) တို့ ပူးပေါင်း တည်ဆောက်နေသော စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသည် ကချင်လူထု၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးကျောင်းများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအုပ်စုများ ၀ိုင်းဝန်းကန့်ကွက်နေသည့်ကြားမှပင် စစ်အဆိုးရက ဇွတ်အတင်း တည်ဆောက်နေသော စီမံကိန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
Map of Dams in Burma - http://www.burmariversnetwork.org/
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 17.4.102COMMENTS
Unusual 2010-ThinGyan News, Photos and Poem From Burma
သင်္ကြန် အကြတ်နေ့ (၁၅၊ ဧပြီ၊ ၂၀၁၀ခုနှစ်) - ရန်ကုန်မှာ ဗုံး(၃)လုံး ဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲ
ဗုံးကွဲပြီးသတင်းဓာတ်ပုံများကြည့်ရန် - http://blog.nyilynnseck.com/2010/04/bomb-blasts-infront-of-x2o-mandap.html
သင်္ကြန် အတက်နေ့ နံနက်အစောပိုင်း (၁၆၊ ဧပြီ၊ ၂၀၁၀ခုနှစ်) - မန္တလေးမှာ လေပြင်းတိုက်၍ ရေကစားမဏ္ဍပ်များ ပြိုလဲ၊ ပျက်စီး
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 16.4.100COMMENTS
Labels: MY NEWS, OTHERS' NEWS, OTHERS' POEMS, PHOTOS
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 3.4.100COMMENTS
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 26.3.100COMMENTS
၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၃)ရက်
၁၃၇၁ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း (၉)ရက်
အထူးကြေညာချက်အမှတ်- ၂/ ၀၃/ ၁၀
http://4shokelay.blogspot.com/2010/03/nld.html ထံမှ ကူးယူ ထပ်ဆင့်ဖော်ပြသည်
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 25.3.100COMMENTS
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 25.3.102COMMENTS
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 23.3.100COMMENTS
သန့် ရှင်း တည်မြဲ ကွဲဖို့ မလိုပါ။ ဒီတစ်ခါကွဲရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုလားပဲဗျို့
သန့် ရှင်း- တည်မြဲကွဲ ဖို့ မလိုပါ
ကျနော်တို့ မမွေးခင်-၁၉၅၈-ခုနှစ်ဖ-ဆ-ပ-လကြီးကွဲတုန်းက၊အဖွဲ့ ချုပ်ကြီးသန့် ရှင်းဖို့လိုသည် ဟုခံယူသော-နုတင်နှင့်၊ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ
့ချုပ်ကြီးတည်မြဲရေးသည်အရေးကြီးဆုံး ဟုခံယူ သော ဆွေငြိမ်းအုပ်စုများ အာဏာပြိုင်ကြတာဖြစ်သည်ဟုလေ့လာမှတ်သားခဲ့ရပါသည်။
အခုလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ကြီးတွင် အဖွဲ့ ချုပ်၏ လိပ်ပြာ၊သိက္ခာ၊သန့် ရှင်း ဖို့ ကအဓိကဟူသော အယူအဆနှင့်အဖွဲ့ချုပ် တည်မြဲဖို့ အရေးကြီးသည်ဟူသောအယူအဆ၊ နှစ်မျိုးကွဲနေတာကိုမြင်နေကြားနေရပါသည်။ ထူးဆန်းစွာတိုက်ဆိုင်နေသည်က တည်မြဲဘို့ လိုသည်ဟု ယူဆသူများကို ခေါင်းဆောင်သူများကလည်း ဆွေငြိမ်း ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
စစ်အစိုးရက၊ ပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ၊ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများကိုထုတ်လိုက် သောအခါ၊ မထင်ခဲ့တာတွေ
ဖြစ်လာပါသည်။ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းတုန်းက၊ ဥပဒေတွေ ထွက်လာရင်၊ရွေးကောက်ပွဲဝင်မ၀င်စဉ်းစားမည်ဟုဆိုခဲ့သည်။
အခုမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေတ ကယ်ထွက်လာတော့ ပါတီဆက်ရှိမည်မရှိမည်ကိုပင် မစဉ်းစားဘဲမရ စဉ်းစားရပါပြီ။ ဥပဒေ တွေ နည်းဥပဒေတွေ
အရပါတီဆက်ပြီးရပ်တည်လိုလျှင်ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထုတ်ပစ်ရမည်၊ ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသူ (၁၅)
ဦးလုံးက၊ တစ်ဦး ချင်း၂၀၀၈ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပါမည်ဟု ၀န်ခံကတိလက်မှတ် ရေးထိုးရဦးမည်။ ထို့ ပြင် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနည်းဆုံး အမတ်နေရာ (၃)နေရာ မ၀င်မဖြစ် ၀င်ရဦးမည်။ ဒါတွေကိုကလေးကအစအားလုံးသိကြပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဧ။်သဘောထားကလည်းရှင်းပါသည်။ဤဥပဒေသည် ဥပဒေအ င်္ဂါရပ်နှင့်မညီပါ၊မတရားပါ၊ထို့ ကြောင့်ကန့် ကွက်ပါမည်။ ထိုကိစ္စများပြီးမှ ပါတီမှတ်ပုံတင်ဖို့ စဉ်း စားတာပေါ့ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်ကတော့ ဆက်လက်တိုက်သွားမည်။ ထိုကာလအ တွင်း မှတ်ပုံမတင်လိုက်ရလို့ အဖွဲ့ ချုပ်အလိုအလျောက်ပျက်ချင်လည်း ပျက်ပါစေဟုဆိုလိုပါသည်။ အဖွဲ့ ဝင်ထု၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်နာပါမည်ဟုဆိုခြင်းမှာလဲ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ၏ရှိနေကြသဘောထားကိုဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ ဝင်ထုက သူ့ ကိုဘေးခဏဖယ်ထား ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည်ဟုဆုံးဖြတ်မှတော့၊ ထိုအဖွဲ့ အစည်းအတွင်းထဲမှာတွယ်ကပ်နေပါရ စေဆိုလျှင် ခေါင်းဆောင်ပီသပါ့မလား။
တည်မြဲအုပ်စုကတော့ ဒီလိုမစဉ်းစားပါ။ ကောက်ကွေးသောယုတ္တိကိုသုံးထားပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တရားဥပဒေအတိုင်းဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်ဘို့ ၊ တရားဝင်အဖွဲ့ အစည်းလိုသည်။အဖွဲ့ အစည်းကိုတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ဘို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအဖွဲ့ ကထုတ်သင့်လျှင်ထုတ်ရမည်တဲ့။
မှတ်ပုံတင်ဘို ၊့၁၉၉၃ခုနှစ်ကတည်းကလက်မခံနိုင်ပါ ဟုဆိုခဲ့သော၊အခုလည်းလက်မခံဟုကန့် ကွက်ထားသော ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို 'ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်' ပါမည်ဟုဝန်ခံလက်မှတ်ထိုးမည်၊ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ခြင်း သည် လက်ခံခြင်း၊ လိုက်နာခြင်းမဟုတ်ပါတဲ့။ ဘယ်လိုစဉ်း စားကြ သလဲ မသိပါ။ နောက်ပြီးဆိုပါ သေးသည်၊ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်လုံးလုံးစွန့် လွှတ်အနစ်နာခံပြီး အ ဖွဲ့ ချုပ် အတွက်လုပ်ကိုင် ခဲ့ကြသူများအတွက် အဖွဲ့ ဆက်ရှိရမည်တဲ့။ ထိုအဖွဲ့ ဝင်များထဲက ဘယ်သူတွေကများ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထုတ်ပစ်ပါလို့ တောင်းဆိုဘူးခဲ့ပါသလဲ။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကဆိုပြန်ပါသည်။ ၁၉၉၁ခုနှစ်တုန်းကလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကိုအဖွဲ့ ချုပ်တည်မြဲရေးအတွက်ထုတ်ပစ်ခဲ့ဘူးပါသည်။
၁၉၉၅ခုနှစ်ပြန်လွတ်တော့ လည်းခေါင်းဆောင်မှုပြန်ရတာပါပဲတဲ့။ ဟုတ်ပါသည်၊ ထိုစဉ်ကထုတ်ပစ်တုန်းက အခြေအနေ က တစ်မျိုးပါ။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ တနှစ်သာရှိသေးသည်။ ရလဒ်က ပူပူနွေးနွေး၊ ဘာဖြစ်မည် လဲ မသိသေး၊ အဖွဲ့ ချုပ်ကိုအဖျက်ခံရခြင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို ဖျက်သည်နှင့် အတူတူဖြစ်နေသည်။ ပြီးတော့ အဖွဲ့ ချုပ်အဖွဲ့ ဝင်များသည် နောက်ထပ်အဖွဲ့ စည်းတစ်ခုကို ဖွဲ့ ဖို့နေနေသာသာ ရှိသည့်ပါတီတွေကို အတင်းဖျက်ပစ်နေသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်များ အားလုံးကိုချိန်ဆပြီး ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင်စသည့်ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်ကိုပါ ထုတ်လိုက်ရသည်။
ခုအခြေအနေက လုံးဝခြားနားနေသည်။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတာအနှစ်နှစ်ဆယ်ရှိတော့ မည်။ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကိုပူပူနွေးနွေးဖျက်ပစ်လိုက်ပြီးပြီ။
ပြီးတော့၊ထို'ပြီးတော့'နောက်တစ် ခု သည်အရေးကြီးပါသည်။ ပြီးတော့အခုအချိန်တွင်အဖွဲ့ချုပ်ကိုအစိုးရကဖျက်သိမ်းလိုက်ပါက လည်း အဖွဲ့ဝင်များသည် မိမိကြိုက်ရာပါတီဖွဲ့ ရန် အချိန်ရှိ သေးသည်။ ထို့ ကြောင့် တရားဝင်ရပ်တည်မှုကိုလိုချင်ပါသည်ဟုဆိုသူများအားတောင်းပန်ပါရစေ
အဖွဲ့ ချုပ်တွင်းက၊ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကိုယ့်ဆန္ဒနှင့်နုတ်ထွက်လိုက်ပြီး၊ တူရာတူရာ၊ သန်ရာ သန်ရာပူးပေါင်းပြီး ကိုယ့်ပါတီကိုယ်ထောင်ကြပါ။ ပြီးတော့ ပါတီနာမည်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်-လက်သစ်၊တို့ ဘာတို့ ခပ်ဆင်ဆင်တပ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ရင်လဲဝင်ပါ။ မြန်မာပြည် မှာရှိနေတဲ့ သံရုံးဝန်ထမ်းတွေကလည်းထောက်ခံကြပါလိမ့်မယ်။ စစ်အစိုးရကလည်းခွင့်ပြုမှာ ပါ။ ကူတောင်ကူညီလိမ့်ဦးမည်။ ကျန်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ချုပ်အစစ်ကိုမဝေဖန်ဘဲ နေမယ်ဆိုရင် ကွဲတယ်ပြဲ တယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ပြည်သူကိုတော့လှည့်ဖြားလို့ရမှာမဟုတ်ပါ။ သို့သော် သမိုင်းမှာတော့ဂိုဏ်းခွဲသူ၊ သင်းခွဲသူများလို့ တွင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ထင် ပါသည်။
ဖ-ဆ-ပ-လကြီးကွဲခဲ့၍ ဦးနေ၀င်းနှင့်စစ်ဗိုလ်များက အာဏာအရသာတွေ့ ခဲ့ကြရသည်။ နောက်တော့ရာစုနှစ်တ၀က်ကျော်နိုင်ငံဒုက္ခရောက်ရသည်။ အခု NLD ကွဲလျှင်တော့ဘယ်တော့ မှ စစ်ကျွန်ဘ၀က လွတ်မည်ကိုမသိနိုင်တော့ပါ။
အဖွဲ့ ချုပ်၏ သမိုင်း သန့် ရှင်းစွာကျန်ရစ်ပါစေ
အထက်ပါဂျာနယ်၏ Embed Code အား မေးမှ ပို့ပေးသော phyowai-mmp အား အထူးကျေးဇူးတင်သည်။
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 22.3.100COMMENTS
Labels: JOURNALS, OTHERS' WRITINGS, SEPTEMBER GOLDEN REVOLUTION
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 19.3.10 1 COMMENTS
NCUM - ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားကောင်စီ- မြန်မာနိုင်ငံ
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 19.3.100COMMENTS
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 15.3.100COMMENTS
Unusual 2010-ThinGyan News, Photos and Poem From B...
Photos To Remember Zaganar (ဇာဂနာ အမှတ်တရ၊ ဇာဂနာ ဓ...